Waa maxay aragtida Kirishtaanka ee isdilka? Muxuu Baybalka ka dhahay isdilka?
Su’aal: Waa maxay aragtida Kirishtaanka ee isdilka? Muxuu Baybalka ka dhahay isdilka?
Jawaab: Baybalka wuxuu sheegay lix dad oo gaar ah ee sameeyay isdilka: Abiimelek (Xaakinnada 9:54), Saul (1 Samuu’eel Labaad 31:4), siideynta hubka Saa'uul (1 Samuu'eel Labaad 31:4-6), Axiitofel (2 Samuu'eel Labaad 17:23), Simrii (1 Boqoroda 16:18), iyo Yuudas (Matayos 27:5). Shan iyaga ka mid ah way xumaayeen, niman dambiilayaal ah (wax badan lagama dhihin ee la xiriirto Saul's armor-bearer si xukun loogu sameeyo sida sifadiisa). Qaarkood waxay tixgeliyaan Samsoon iyo degdega isdilka (Xaakinnada 16:26-31), laakin hadafka Samsoon waxay aheyd inuu dilo Falastiinta, ma ahan nafsadiisa. Aragtiyada Baybalka ee isdilka sida la midka ah dil, taasi oo ah waxa ay tahay—is-dilka. Illaah kaliya waa mid oo ah inuu go’aansado goorta iyo sida ah inuu qofka u dhinto.
Sida waafaqsan Baybalka, isdilka ma ahan waxa go’aansado haddii qofka helaa gelitaanka janada. Haddii qof aan badbaadsaneyn sameeyo isdilka, ma sameynin waxba laakin “dadajiso” safarkiisa ee ku socdaa naarta. Si kastaba, qofkaas ee sameeyay isdilka wuxuu si dhab ah ugu jirayaa naarta Oo diidmada badbaadada oo dhinaca Masiixi, ma ahan sababtoo ah wuxuu sameeyay isdil. Muxuu ka yiri Baybalka Kirishtaanka sameeyo isdilka? Baybalka wuxuu na baraa in ka bilow xiliga aan si dhab ah u aamino Masiixi, waxaa naloo balanqaaday nolol daa’in ah (Yooxanaa 3:16). Sida waafaqsan Baybalka, Masiixi wuxuu ogaan karaa wax dhaafsan shaki walba ee ay keenaan ee nolosha daa’inka (1 Yooxanaa 5:13). Ma jiro wax ka kala gooniyeyn karo Kirishtaanka jaceylka Illaah (Rooma 8:38-39). Haddii maya tahay “waxyaabaha la abuuray” ay ka gooniyeyn karaan Kirishtaanka jaceylka Illaah, iyo xittaa Kirishtaanka sameeyay isdilka waa “waxyaabaha la abuuray,” kadib ma ahan xittaa isdilka inuu ka gooniyeyn karo Kirishtaanka jaceylka Illaah. Ciise wuxuu u dhintay dhammaan dambiyadeena, iyo haddii Kirishtaanka dhabta ah, waqtiga weerarka ruuxa iyo daciifnimada, sameeyo isdilka, taasi waxay weli noqoneysaa dambiga ku daboolan dhiiga Ciise.
Isdilka weli waa dambi halis ah ee Illaah ka soo horjeedo. Sida waafaqsan Baybalka, isdilka waa dil; marwalba waa qalad. Shakiyada dhabta ah waa inay sheegtaa xaqiiqda aaminaada ee sheegtay inay weli yihiin Kirishtaanka sameeyay isdilka. Ma jiraan wax xaalado ah ee xaqiijin karo qof kale, gaar ahaan Kirishtaanka, qaadashada noloshiisa/nolosheeda. Kirishtaanka waxaa loo wacaa inay u noolaadaan nololahooda Illaah, iyo go’aanka ee goorta la dhimanayo waa Illaahey iyo Ilaah kaligiisa. InKastoo aysan sharaxeynin isdilka, 1 Korintos 3:15 dhabtii waa sharaxaad wanaagsan ee waxa ku dhaca Kirishtaanka sameeyaa isdilka: “Isaga nafsadiisa ayaa ka badbaadayo, laakin kaliya sida mid ka baxsanayo dhinaca holaca.”